Umatshini oManzi oManzi oMbane oMatshini oMbane oMatshini oMbane, abaxhasi - China Millimeter Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD500H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kunye ne-fittings ezifana ne-elbow, i-tees, i-cross, i-wye kunye neentsimbi ze-flange ngaphandle kwezixhobo ezongezelelweyo ngokulungisa i-clamps. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; Ulwakhiwo olulula, oluncinci kunye nedeli ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD1000H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. PTFE esuswayo camera ubushushu ipleyiti kunye nenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD800H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungelelanisa izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD630H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. PTFE esuswayo camera ubushushu ipleyiti kunye nenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD450H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kunye ne-fittings ezifana ne-elbow, i-tees, i-cross, i-wye kunye neentsimbi ze-flange ngaphandle kwezixhobo ezongezelelweyo ngokulungisa i-clamps. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; Ulwakhiwo olulula, oluncinci kunye nedeli ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD355H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kunye ne-fittings ezifana ne-elbow, i-tees, i-cross, i-wye kunye neentsimbi ze-flange ngaphandle kwezixhobo ezongezelelweyo ngokulungisa i-clamps. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD200H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. PTFE esuswayo camera ubushushu ipleyiti kunye nenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; Ulwakhiwo olulula, oluncinci kunye nedeli ...
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-SUD160H ngoomatshini be-hydraulic butt fusion. Isetyenziselwa ukubopha umbhobho wokufaka kunye nokufakwa okufana nengqiniba, iti, umnqamlezo, i-wye kunye neentsimbi zentsimbi ngaphandle kwezixhobo ezongezelelekileyo ngokulungisa nje izibopho. Kufanelekile ukuba welding umbhobho weplastiki kunye nokufakwa ezenziwe HDPE, PP, izinto PVDF. I-PTFE esusekayo ishushu ipleyiti yokufudumeza ngenkqubo yolawulo lobushushu eyahlukileyo. Isixhobo sokucwangcisa umbane. Yenziwe ngezinto ezinobunzima kunye namandla aphezulu; ulwakhiwo olulula, encinci kunye ...